၁ နဲ့ င၊ ပ နဲ့ ဂ – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	၁ နဲ့ င၊ ပ နဲ့ ဂ
← လမ်းပြဖို့ လမ်းပျောက်နေသူများကျွန်တော်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး →
4 comments on “၁ နဲ့ င၊ ပ နဲ့ ဂ”	မေကျော် says:	November 5, 2009 at 2:58 pm	ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ၁ နဲ့ င လာပေးပြီးကြောင်း ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်က တဂ်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုဇောက် အဲ မှားလို့ ကိုဇော့ခသတ်စသတ် အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဆက်တဂ်လို့မရပါကြောင်းကို ကျွန်တော်မှ စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြင့် ပြောကြားလိုပါကြောင်း… 😀
ကျွန်တော် says:	November 5, 2009 at 3:18 pm	အား……………..ကျွန်တော့်ကိုနာမည်ဖျက်နေတာဘဲ..ဂါး…. အဟင့်.. ဂျီးဒေါ်..အားနေပုံရတယ်.. တဂ်ပို့စ်မြန်မြန်ရေးပေး.. အခုလို ကျွန်တော်ကတဂ်တဲ့ပို့စ်ကို ရေးပေးတဲ့ ကျွန်တော်ကြီး ကိုzoxကို အထူးကျေးဇူးတဂ်ရှိပါတယ်..ဟဲဟဲ
နေ့အိပ်မက် says:	November 9, 2009 at 7:58 pm	ဒီကျွန်တော်နဲ့ ဟိုကျွန်တော်ကလည်း ဆုံမှဆုံတတ်ပလေ.. နေ့အိပ်မက်က ကျွန်မဆိုတော့.. သိပ်မဆိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်.. ဟိုဟာက ပြဿနာလာဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘူး.. မက်စရာအိပ်မက်ဘာရှိလဲ လာချောင်းတာ.. 😛
အိမ် says:	December 20, 2009 at 4:07 pm	တားတိတာက အဲဒီစာလုံးတွေက မျက်စေ့စစ်ရင် ဖတ်ရတဲ့ စာလုံးတွေပါ ခင်ညာ။